पर्यटकीयस्थल र होटल करको दायरामा « प्रशासन
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा भुरुङ तातोपानी कुण्डबाट २५ लाख र पुनहिलबाट पाँच लाख ५० हजार कर संकलन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुनहिलबाट २५ लाख र घोडेपानीबाट पन्ध्र लाख कर उठाउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए ।
उठेको कर सम्बन्धित ठाउँको विकासका लागि सत्तरी र तीस प्रतिशत गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अध्यक्ष पुनले बताए । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रमा हालसम्म स्थानीय होटल व्यवस्थापन उपसमिति र युवा क्लबले कर उठाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय सामाजिक संघसंस्था परिचालन गरेर कर संकलन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत वार्षिक १५ हजार प्रतिमेगावाट कर उठाउने निर्णय भएको छ ।
क्रसर उद्योगलाई वार्षिक ५० हजारका दरले कर निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिका–५ पाउद्वार र वडा नं. ६ घारको रातोपानी कुण्डबाट समेत वार्षिक पचास/पचास हजार कर उठाउने भएको छ । तौल बढी भएका उपकरण सूचीकृत हुन वार्षिक रु बीस हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सहायक सडकमा सञ्चालन हुने बसलाई वार्षिक रु बाह्र हजार, जीपलाई दश हजार र ट्र्याक्टलाई पन्ध्र हजार कर निर्धारण गरिएको छ । होटललाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर वार्षिक करको दर निर्धारण गरिएको छ ।
(क) वर्गलाई २० हजार, (ख) लाई १० हजार, (ग) लाई पाँच हजार, (घ) लाई दुई हजार र (ङ) लाई एक हजार कर निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिकाका वडामार्फत व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालन गरिएको वडा नं. ६ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता बरुवालले बताए । २९ करोडको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले एक करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत दाहालले बताए । रासस